Snn Nepal कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भेटिएको भन्नेबारे नेपालले माग्यो बेलायतसँग जवाफ – Snn Nepal
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भेटिएको भन्नेबारे नेपालले माग्यो बेलायतसँग जवाफ
काठमाडौं । बेलायती सञ्चारमाध्यमले नेपाली प्रजातिको कोरोना भाइरस युरोपेली मुलुकमा फैलिएको सनसनीपूर्ण खबर सम्प्रेषण गरेपछि नेपालले त्यसको जवाफ मागेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेलायत सरकारलाई ई-मेलमार्फत पत्र पठाउँदै यसबारे जानकारी माग गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार नेपालमा नयाँ भेरियन्ट भेटिएकोबारे जानकारी पठाउन बेलायतको इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनलाई पत्राचार गरिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय हेल्थ रेगुलेसन हुन्छ । बेलायतको आईएचआरको फोकल पर्सनलाई मिडियामा आएको कुरा के हो भनेर मेल गरेका छौँ’, प्रवक्ता डा. पौडेलले भने ।
बेलायती सञ्चारमाध्यम डेली मेल, दी टेलिग्राफ र इन्डिपेन्डेन्टले कोराेना भाइरसको नेपाली प्रजाति भेटिएकाे भन्दै समाचार प्रकाशन गरेका थिए। डेली मेलले त नेपालको भेरियन्टका कारण बिदासमेत प्रभावित भएको लेखेको छ ।
नेपालमा नयाँ भेरियन्ट नभएको बरु यूके भेरियन्ट र डेल्टा भारतीय भेरियन्ट सक्रिय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रलायले बताइरहेको बेला बेलायती सञ्चारमाध्यमले नेपाली भेरियन्टको चर्चा चलाएका हुन् ।
प्रवक्ता डा. पौडेलले नेपाली भेरियन्ट फैलिएकोबारे अहिलेसम्म जानकारी नआएको र यसबारे अध्ययन पनि भइरहेको बताए । ‘नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउन जिन सिक्वेन्सिङ गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नेपाली भेरियन्ट आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।स्वास्थ्य मन्त्रालयले अल्फा र डेल्टाबाहेक नयाँ भेरियन्ट पत्ता नलागेको बताइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालमा अल्फा, डेल्टा र कम्पा भेरियन्ट मात्र देखिएको र हाल डेल्टा भेरियन्ट मात्रै सक्रिय रहेको बताएको छ ।